Tekisi yeramangwana iri chikamu chezvino (uye IV): Uber | IPhone nhau
Iyo tekisi yeramangwana chikamu chezvino (uye IV): Uber
Kukosheswa pamamirioni anopfuura makumi matanhatu emamirioni euros, hapana munhu ane kana nekashoma kadiki kekupokana kuti ndiani ari kutarisira nyika yekufamba 2.0. Uber inhanho imwe pamusoro peimwe yekutenda kune ine hukasha yekuwedzera mutemo, kuvimbika kwevashandisi vayo uye nemushandisi chiitiko icho chave ichipa kubva kutanga kwayo. Inguva yekuongorora mambo.
1 Uber anotonga pano
2 Uber kuSpain
3 Kuedza Uber
Uber anotonga pano
Mushure mekugadziriswa kwechangobva kuitika kuapp, Uber ikozvino nyore uye nekukurumidza kushandisa kupfuura nakare kose. Kukumbira rwendo inyaya yemasekonzi mashoma, sezvo ivo vakaisa nguva yakawanda mukuita maitiro acho nekukurumidza uye zvine musoro sezvinobvira kuti vasapedze nguva yakawanda kupfuura isingadzivisike.
Ehezve, zvese zvakanakira izvo zvakagara zvichiratidza Uber zvinochengetwa, sekukamurwa kuita mhando nhatu dzemaprofiles (pachedu, mhuri uye bhizinesi), mukana wekugovana mwero neshamwari dzedu parwendo rumwe chete kana akasiyana masevhisi avanosanganisira. .sarudzo dzakasiyana senge motokari dzemagetsi, mota hombe, sedan dzemhando yepamusoro, chekuendesa chikafu kana kunyange mukana wekutumira nekugamuchira mapasuru.
Pamusoro pezvese izvi, hazvigone kufuratirwa kuti kuve mutungamiri asina kupokana wechikamu, irowo ikambani ine mota zhinji uye nekudaro iyo ichaita kuti timirire zvishoma kutora rwendo muzviitiko zvakawanda. Ehezve, chenjera kune vane mukurumbira kuwedzera mitengo kana tichizoshandisa sevhisi panguva yepamusoro kana pazviitiko.
Mamiriro eUber muSpain izvozvi anogona kunzi ari pakati nepakati akanaka uye ane tariro. Mushure mekuvimbisa kutanga, kubva kunyika yeTekisi nyama yese yakaiswa pane grill yekuyedza bvisa Uber nenzira dzese dzinogona kuita zviri pamutemo, pakupedzisira kuita kuti kambani imire kushanda.
Mushure mechinguva chekusavapo, Uber akadzokera kuMadrid kanopfuura gore rakapfuura nemuenzaniso unoshandiswa naCabify, ndiko kuti, vatyairi vane rezinesi reVTC, iri pamutemo zviri pamutemo. Dzimwe nguva huwandu hukuru hwemotokari hukashaikwa, asi rezinesi rinogumira mikana yacho zvakanyanya uye izvo zviri pachena kuti zvaifanira kucherechedzwa. Kunyangwe zvakadaro, sekutonga kwakawanda, kumirira mota ipfupi uye zvine musoro.
Zvirongwa zvekambani inotungamirwa naTravis Kalanick zvinopfuura nekumhara mune mamwe maguta muSpain, vakwikwidzi vaviri vanotevera vari Valencia neBarcelona.
Kana usati wamboshandisa Uber uye inowanikwa mune rako razvino guta, unogona kukopa Anwendung uye kuwana rwendo rwechipo (Inosiyana muhuwandu zvinoenderana nemwaka). Neimwe nzira iwe unogona kuita a yemahara hapana kunyoreswa kwechikwereti kana uchida mune iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iyo tekisi yeramangwana chikamu chezvino (uye IV): Uber
Ndiri kutarisira kuti Uber ikozvino inogona kushandiswa nenzira yakajairika muSpain yese, ndakafamba neSouth America uye unofadza kuishandisa imomo nekuchengetedza mari yakanaka nekudzivirira matekisi kana zvimwe zvinodhura zvakavanzika zvekutakura. Pasina kupokana ndinofunga zviri nani kupfuura Cabify asi izvo zvataurwa, ngazvipfuurire sezvazvinofanira kuita muSpain yese.
ING inosvika kuAustralia neApple Pay. Iwe unoda zvishoma kuSpain here?